‘एलोपेथी खानु’ भन्छन् वुधवारेका कविराज « Loktantrapost
‘एलोपेथी खानु’ भन्छन् वुधवारेका कविराज
१२ चैत्र २०७२, शुक्रबार ०४:४७
चिकित्सा क्षेत्रमा बेथिति बढिरहेको विषय आम चिन्ताको सन्दर्भ हो । बुधवारेको आयुर्वेदिक औषधालयमा कार्यरत कविराजले मर्यादाविपरीत गतिविधि गरिरहेको विषयमा सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउन स्थानीयवासीले पठाएको यो पत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिन आवश्यक ठानेर हामीले प्रकाशित गरेका छौँ । हाम्रो उद्देश्य बेथिति सुधार्नु मात्र हो । पढ्नुहोस् पत्र जस्ताको तस्तै–सं.
कुरा हो आयुर्वेद औषधालय बुधबारेको । सरकारले पूर्वीय परम्परागत चिकित्सा पद्धतिका रुपमा विकसित आयुर्वेदिक उपचार सेवालाई देशव्यापी बनाउने योजना अनुरुप बुधबारेमा यसको स्थापना गरेको हो ।
हिमाली जडिबुटी तथा आप्mनै वनजङ्गल खेतबारीका औषधीय गुण भएका वनस्पतीबाट निर्मित आयुर्वेदिक औषधिहरू भिन्न प्रभाव (साइडइफेक्ट) नहुने, एलोप्याथी औषधिबाट निको हुन नसकेका कतिपय दीर्घरोग निको हुने जस्ता विशेषताहरूले यो चिकित्सा पद्धति र यसका औषधिको आप्mनै महत्व छ । तर, हाल बुधबारेका आयुर्वेद औषधलायमा कार्यरत कविराज पुरन लहेरीको हेलेचेव्रm्याइँ र कर्तव्य विमुखताले स्थानीय जनतामा आव्रmोश भरिन थालेको छ ।
केही महिना अगाडिसम्म यहाँका झा थरका एक वैद्य र अधिकारी थरका एक कार्यालय सहयोगी थिए । अधिकारी उमेर हदले निवृत्त भए । झा कविराज पुरन लहेरीसँग टिक्न नसकेर सरुवा लिएर गए । टिकुन् पनि कसरी ? लहेरी दिनरात औषधालय बाहिरबाट सःशुल्क सेवा दिइरहने, झा एक्लैले औषधालय थाम्नु पर्ने । तीन जना स्टाफ हुँदा पनि लहेरी औषधालयमा हुँदैन थे । अहिले उनी एक्लै छन् । अहिले पनि कार्यालयमा भेटिँदैनन् ।
धेरै जसो सिनेमाहल रोडको देवेन्द्र थपलियाको सिद्धदेवी मेडिकल स्टोरमा भेटिन्छन्, कहिलेकाहीँ सम्बन्धित बिरामीका घरमा । भनिन्छ, यिनी एउटा बिरामी जाँचेको ४ सय रुपैयाँसम्म लिन्छन्, यिनको प्रत्यक्ष निगरानीमा राखियो एकाध घण्टा भने त्यसको अलग फिस जोडिन्छ । यो भयो यिनको सरकारी नियुक्तिलाई कुल्चेर पैसा सोहोर्ने द्रव्य पिशाच पारा ।
अब जनताले नबुझेको अर्को कुरा छ–लहेरी नरदेवी क्याम्पस पढेका हुन्, जहाँ आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति र औषधिको ज्ञान सीप प्रदान गरिन्छ । तर, यहाँ त पुरन लहेरी ‘डाक्टर’ कहलिन्छन्, एलोप्याथी उपचार पद्धतिबाटै रोगको निदान गर्छन्, एलोप्याथी औषधि नै खान निर्देशन (प्रेस्काइव) गर्छन् ।
होइन, कहिले कसले पढायो यिनलाई एलोप्याथी चिकित्सा पद्धति ? यिनका शैक्षिक प्रमाणपत्रले यिनीसँग एलोप्याथी चिकित्सा पद्धति र औषधिको ज्ञान भएको प्रमाणित गर्छन् ? एलोप्याथी औषधिहरू विभिन्न भौतिक रासायनिक प्रव्रिmयाले निर्मित हुन्छन् र तिनमा प्रयुक्त केमिकल्स र तिनको प्रतिव्रिmयाले लाभहानीको निर्धारण गर्छ भन्छन् जानिफकारहरू । अनि लहेरीले यी सबै कुराको प्रशिक्षण कहाँ पाए ?
अनुभवले नै सबै कुरा हुने भए त्यो नरदेवी क्याम्पस र टिचिङ हस्पिटल किन खोलेको हो ? आखिर घाटे वैद्यले पनि काठमाडौँमा ओखतीमुलो गरेकै थिए कि लहेरी नामधारी यी साढे मनुवा प्रचलित नियम कानुनभन्दा माथि हुन् ? यिनको मनपरीबाट जनताको स्वास्थ्यमा पर्ने प्रतिकूल प्रभावको जिम्मेवार को हुने ? के यी र यिनीजस्ता कर्तव्यविमुख कर्मचारीको अनुगमन गर्ने निकाय छैन ? जिल्ला आयुर्वेद चन्द्रगढी वा अञ्चल आयुर्वेद आइतवारे इलामका हाकिमहरू के हेर्छन् ? हुन त ती पनि यही चालमा होलान्, तर यिनले जथाभावी गर्न पाएका छन् ।
आयुर्वेद औषधालय बुधबारेमा तपाईं जानुहोस्, कि बन्द पाउनुहुन्छ कि कविराजको +२ पढ्ने छोरा भेट्नु हुनेछ । एलोप्याथी औषधिले निको नभएर आयुर्वेदको शरणमा आएका पुराना रोगी हुन् वा आयुर्वेदमै विश्वासले आएका नयाँ रोगी कविराज लहेरीको अनुपस्थितिले जनता आजित भइसकेका छन् ।
भनिन्छ, लहेरीले बुधबारेका राजनीतिक, आर्थिक क्षेत्रमा अगुवाई गर्नेहरू सबैलाई मुखबुजो लगाएका छन् र त उनका विरुद्ध कोही बोल्दैन । अनि प्रहरी चौकीमा लोग्ने स्वास्नीको झगडा र घरेलु मुद्धा आए गाउँ लाग्ने बुद्धिजीवि र नागरिक समाजका अगुवाको पनि आँखा यो अनाचारमा पुगेको छैन । होइन कसरी चित्त बुझाए लहेरीले यिनको पनि हँ ? हुन त यिनको टाउको दुखे बीएन्डसी र विर्ता सिटीहरू छँदैछन् । यहाँ सामान्य जनताले लहेरीको सेवा नपाउँदा यिनको के जान्छ र ?
आप्mना क्षेत्रका सेवा प्रदायक कार्यालयहरूको निगरानी त गाविसले राखे पनि हुँदो हो । तर, बुधबारे गाविस सानो बजेटको अल्प भागबन्डाको लुछाचुँडी मै व्यस्त पाइन्छ ।
लौ न यो चिठी छापिपाउँ, देशको यस कुनामा हँुदै गरेको मर्यादाहीन व्रिmयाकलाप सार्वजनिक गरौँ अनि जनताको स्वास्थ्यमाथि हुँदै गरेको खेलबाड रोक्न सहयोग पुर्याऔँ ।
बुधबारेका आम जनता